FAKAFAKA: ny fifanajana no zava-dehibe ! | NewsMada
FAKAFAKA: ny fifanajana no zava-dehibe !
Na ambara etsy sy eroa aza fa iray ihany ny Malagasy, misy ihany kosa ny tsy iraisana. Iray amin’ireny ny fomba amam-panao sy ny kolontsaina sasantsasany. Samy manana ny azy ny isam-pianakaviana, ny isam-poko, ny isam-paritra, sns. Ny any avaratry ny Nosy ahenoana ny salegy, eto afovoan-tany misy ny kalon’ny fahiny, ny any atsinanana itoeran’ny basesa, ny any atsimo misy ny beko, ny any andrefana malaza amin’ny baohejy… Toraka izany koa ny fomba sy ny fanatanterahana izany, misy ny mahasamihafa azy ireny.
Tsy azo lavina fa harena goavana ho an’i Madagasikara sy ny Malagasy ny fanana io fahasamihafana io. Mba hampirindra sy higohana io haren’ny fahasamihafana io anefa, ilaina ny fifanajana. Hajaina ny fomban’ny hafa, ny hafa ihany koa manaja ny fomban’ny tena . Toraka izany hatrany hatrany. Tsy zava-tsarotra amin’ny Malagasy rahateo ny mifanaja satria io ilay fomba iraisana sy iainana ao anaty fiarahamonina. Ny zandry manaja ny zoky, ny zanaka manaja ny raiamandreny, ny velona manaja ireo efa nodimandry, sns.
… Ho an’ny fiarahamonina malagasy fahiny, tsy tongatonga ho azy ny fahaiza-manaja ny hafa sy ny fombany ary ny momba azy manontolo fa miankina indrindra amin’ny fitaizana sy ny fanabeazana. Noho izany, tsy afa-miala rehefa mety ho mpanabe sy mpampianatra ary ny raiamandreny. Adidy goavana io ka tsy azo ialana. Izy ireo rahateo no ho voatondro molotra ho tsy nahay nitaiza sy tsy nahay nanabe raha misy ny taranaka tsy mahay manaja olona sy ny fombany ary ny maha izy azy manontolo.
Mila mandray andraikitra sy manabe ny zanaka (taranaka) ny ray aman-dreny niteraka, ny raiamandreny isan-tokony, ny mpanabe isan-tsokajiny, ny mpampianatra isan’ambaratongany, mba hahay hifanaja ny Malagasy. Raha izany no tanteraka, ny Malagasy no ho tretrika indrindra amin’ny samy mponina eto ambany masoandro satria manana harembe izy. Ny harena mahazatra (vatosoa, volamena, vy, hazandranomasina, …), sy ilay harena ny fahasamihafana !